Umfutholuketshezi Breaker, Breaker Chisel, Inner Bush - Monteono
Sizama konke okusemandleni ethu ukuxhasa insizakalo esheshayo yokuthengisa ngemuva kwamakhasimende asekhaya aphesheya imikhiqizo esezingeni lokuqalaFunda kabanzi
Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle nesikweletu ukusivumela ukuthi sikwazi ukusetha amahhovisi egatsha nabasabalalisi ezweni lethu.Funda kabanzi
I-ISO yethu iqinisekisiwe. kanye nezidingo zokuphepha ze-CE.Funda kabanzi
Hebei Monteono Imishini Technology Co., ltd.
Sekukhiqize izando zokubacindezela isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi. Lesi ukuqala kwenqubo egxile kwezokuphepha kuyo yonke inqubo
MES2500 MES3000 MES3500 MES4000 rock wokubacindezela ...
FURUKAWA HB1200 umfutholuketshezi Breaker Seal Kit Hamm ...
PC210 EX200 umfutholuketshezi isando full breaker ...
Onke amamodeli wokufakwa uphawu kwekhwalithi enhle ye-O-Ring Hydrauli ...
Izingxenye zokwakha imishini yomgwaqo, eziqinile nokugqoka ...
Factory Ngqo Thengisani SB81 umfutholuketshezi full st ...
I-INDECO MES121 / 150 Izimpawu Zokushintshwa zeBreak H ...
SOOSAN / FURUKAWA Series umfutholuketshezi Breaker Ukuze M ...
Amazwe esikhiphe kuwo
1, ubuchwepheshe bokusebenza be-excavator Okokuqala ukuqinisekisa isimo esizungeze i-. Ukusebenza kwe-Rotary, ezungeze izithiyo, isimo sendawo ukwazi amaphuzu, ukusebenza okuphephile; ukusebenza, ukuqinisekisa i-fore-and-aft direction track, ukugwema ukuncipha noma umthelela; zama ukunganikeli idrayivu yokugcina ebusweni benkomba yezimayini, kungenjalo kube lula ukulimaza i-motor egijima noma i-hose; ukusebenza, ukuqinisekisa ithrekhi elungile ngokuxhumana okugcwele nomhlabathi, kukhulisa ukuzinza okunamandla komshini ophelele. 2, indlela ephumelelayo yezimayini Lapho isilinda sebhakede nesixhumanisi esiphakathi kwenduku yebhakede, isilinda nebhakede lenduku liwela kuma-90 degrees, amandla amakhulu okumba; amazinyo ebhakede kanye nomhlabathi nge-degree engu-30 degree, okumba okungcono kakhulu ukuthi umhlabathi usika ukumelana ubuncane; ngokumbiwa kwenduku yebhakede, ...
1. Amandla okuwohloka afanele Ukuchotshozwa okuphumelelayo, okwephula umfutholuketshezi kusebenzisa amandla afanele okwephuka. Uma amandla okuphuka enganele, khona-ke amandla esando se-piston ngeke abe ngubhuqu osebenzayo; Ngale ndlela, ibutho lamandla eliphikisayo lesando lizodluliselwa emzimbeni we-rock breaker nasengalweni enkulu ye-excavator / loader, ngaleyo ndlela kulimaze lezi zingxenye. I-Excavator / Loader, ngakolunye uhlangothi, amacala amakhulu okuphakamisa izingalo, uma amandla okubhoboza emakhulu kakhulu futhi, lapho ephukile, umshini kungenzeka ukuthi uvele ku-gravel uthambekele ngokuzumayo, isando, isando hit its hard so kungadala ukulimala kwesando esiphukile , imisebenzi yokulwa, ngaphansi kwesimo sokudlidlizela izophinde isabalale nakwisigaxa semikhumbi amasondo, kufanele igweme ezimweni ezinjalo. Ngakho-ke ngesikhathi somsebenzi wesiteleka, naka njalo ...
Njalo emahoreni ayisishiyagalombili okusebenza noma kanye ngosuku, ukuhlolwa kokugudluza kuyadingeka.Izinto zokuhlola zifaka phakathi: • amabhawodi okuxekethile, ukuvuza kukawoyela, izingxenye ezonakele, izingxenye ezinesici nezingxenye ezigugile isimo sohlelo lwe-hydraulic • hlola ubakaki wamabhawodi avulekile noma amabhawodi alahlekile • hlola isimo semigqa ye-hydraulic kanye namalunga isando Hlola izinto ezintathu ezilandelayo njalo emahoreni ayi-10 okusebenza noma kanye ngeviki 1) hlola okokusebenza kwe-hydraulic • hlola ulayini we-hydraulic ukulimala noma ukugqoka • hlola amalunga we-hydraulic ngomonakalo noma ukuvuza
Isando esincane sokususa nesokubacindezela sihlanganisiwe ukufeza inhloso yomshini wezinhloso eziningi. Umqondo oyinhloko ukusebenzisa uhlelo lwe-hydraulic lwe-scraper encane uqobo ukulungisa indawo yesando (kufaka phakathi ukulungiswa kokuphakama nokulungiswa kwe-Angle), futhi ngasikhathi sinye ukwandisa isethi yamapayipi wamandla we-hydraulic wesando somsebenzi isando. I-bookmark2, uhlelo lwe-retrofit lwesando esisha sokuphuka, lisebenzisa ngokugcwele uhlelo lwe-0.75 scraper ngaphandle kokulimaza isakhiwo sokuqala ngangokunokwenzeka. Ingalo yokuqala enkulu yokususa imfushane kakhulu ukulungisa isimo sesando esiphukileyo, ngakho-ke isethi entsha yengalo enkulu enwetshiwe izomamethwa ukulungisa ukuphakama kwesando esiphulayo. Indlela kawoyela yokulahla isuswa iye engalweni engezansi ngemuva kwe-mod ...
Kungani ungeze i-nitrogen? I-nitrogen esandeni esicoboshayo Isebenzisa isando esichoboza umfutholuketshezi ukugcina amandla asele namandla abuyayo episton ngesikhathi sesiteleka sangaphambilini, futhi ikhipha amandla ngasikhathi sinye ngesikhathi sesiteleka sesibili ukukhulisa ikhono lesiteleka. Ngamafuphi, umphumela we-nitrogen ukukhulisa amandla wesiteleka.Ngakho-ke, inani le-nitrogen linquma ngqo ukusebenza kwesando esichobozayo. Ngingafaka i-nitrogen engakanani? Ingakanani i-nitrogen okufanele ingezwe, lokhu ukukhathazeka kwabavubukuli abaningi.I-nitrogen eyengeziwe ingeziwe, ingcindezi enkulu kudivayisi yokugcina amandla, kanye nengcindezi yokusebenza efanele yedivayisi yokugcina amandla iyohluka kancane ngokusho kwemininingwane amamodeli wesando ochotshozayo kanye ne-diffe ...
abakhiqizi full fracturing babelana appli ...